Tencent ဥက္က President ္ဌ Liu Zhuming သည် Tencent ဂီတ ဘုတ် အဖွဲ့မှ နုတ်ထွက် ခဲ့သည် – Pandaily
May 30, 2022, 13:59ညနေ 2022/05/30 14:01:27 Pandaily
Liu သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Tencent Music Board သို့ဝင်ရောက် ပြီးနောက် Tencent Group ၏ဥက္က president ္ဌ ဖြစ်သည်။ ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ခြင်းအပြင် Tencent Music သည် Zheng Jiaxiu အား ဘုတ် အဖွဲ့ဝင် အသစ် အဖြစ်ခန့်အပ် ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Cheng သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလတွင် Tencent Group သို့ဝင်ရောက် ခဲ့ပြီး ဒုတိယ ဥက္က president ္ဌ ဖြစ်သည်။ သူသည် Tencent ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် စာဖတ် ခြင်း ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သော China Literature Co., Ltd. ၏အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သည်။
Mr. Cheng သည် Chartered Certified Accountants အဖွဲ့၏ အကြီးတန်း အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင် Polytechnic တက္ကသိုလ်မှ စာရင်းကိုင် ဘွဲ့ ရရှိ ထားသည်။ Tencent သို့မ ၀ င် ခင် Cheng သည် PricewaterhouseCoopers နှင့် China Everbright Technology Co., Ltd. တွင်အလုပ်လုပ် ခဲ့သည်။
Tencent Music သည် လက်ရှိတွင် QQ Music, Cool Dog Music, Cool Music နှင့် WeSing တို့ ကိုပိုင်ဆိုင် ထားပြီး အွန်လိုင်း ဂီ တ၊ အသံ၊ K သီချင်း နှင့် ဂီတ ဗဟိုပြု တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် အကြောင်းအရာ များ ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် Tencent Music သည်ပထမ သုံးလပတ် ဘဏ္ financial ာရေး အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီး ဝင်ငွေ နှင့်အ သားတင် အမြတ် ကျဆင်းခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ ၏ပထမ သုံးလပတ် ဝင်ငွေ သည်ယွမ် ၆ ၆၄ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၉၉. ၈၇ သန်း) ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၅. ၁% ကျဆင်းခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အစုရှယ်ယာ ရှ င်များ၏ အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၆ ၀၉ သန်း ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် Q1 ဂီတ ကြေး ပေးသွင်း မှု ဝင်ငွေ သည်ယွမ် ၁. ၉၉ ဘီလီယံ၊ တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၇. ၈% တိုးတက် မှု၊ အွန်လိုင်း ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှု ဝင်ငွေ သည်ယွမ် ၂. ၆၂ ဘီလီယံ၊ တစ်နှစ် တစ်နှစ် ၄. ၈% ကျဆင်း မှု၊ လူမှု ဖျော်ဖြေရေး ၀ န်ဆောင်မှု နှင့်အခြား ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၄. ၀၃ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Tencent ၏ပထမ သုံးလပတ် IFRS အသားတင် အမြတ် သည် တစ်နှစ်လျှင် ၂၃% ကျဆင်း ခဲ့သည်
Tencent Music Q1 အွန်လိုင်း ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှု သည် သုံးစွဲသူ ၈၀. ၂ သန်းကို ပေးဆောင် ခဲ့ပြီး ယမန်နှစ် အလားတူကာလ ကထက် ၃၁. ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်း ဂီတ ၀ န်ဆောင် မှုအတွက် ငွေပေးချေ မှုနှုန်းသည် ၁၃. ၃% ရှိပြီး ၂၀၂၁ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် Q1 နှင့် Q4 ထက်ပိုမိုမြင့်မား ခဲ့သည်။ ထူးျခား တာက အြန္လုိင္း ေတးဂီတ ၀န္ေဆာင္ မႈကုိ Mobile Live အသုံးျပဳ သူေတြဟာ ယခင္ႏွစ္ ကထက္ ၁ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္း ခဲ့ၿပီး ၆ ၀၄ သန္း အထိ က်ဆင္း ခဲ့ၿပီး လူမႈေရး ေဖ်ာ္ေျဖေရး လစဥ္ အသုံးျပဳ သူေတြကေတာ့ ၂၇ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္း ခဲ့ကာ ၁၆၂ သန္း အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။
Tencent Music Entertainment Shuffle တွင် QQ Music နှင့် WeSing တို့ ပါဝင်သည်
Tencent ဂီတ ဖျော်ဖြေ ရေးအဖွဲ့(TME) သည်၎င်း၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှစ်ခုဖြစ်သော QQ Music နှင့် WeSing တို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ညှိနှိုင်း ရန် ကြာသပတေး နေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။